Imgur manavao tanteraka ny famolavolana Material | Androidsis
Imgur dia mahazo fanavaozana lehibe amin'ny kinova 2.0 miaraka amina endrika havaozina tanteraka
Raha efa ho fotoana fohy lasa izay isika dia niresaka momba ny fanavaozana BBM tanteraka Miaraka amin'ny Material Design amin'ny Android, izao no fotoana hahatongavan'ny fahatongavana lehibe hafa, na dia ao amin'ny kinova farany aza izy io, miaraka amin'i Imgur. Iray amin'ny serivisy tsara indrindra for ampidiro ny karazan-tsary rehetra ary anisan'ireo kalitaony ny fanafoanana ny angon-drakitra. Ankoatr'izany, Imgur dia iray amin'ireo laharana voalohany amin'ny Internet ahafahanao mahita ny fironana sy ny viriosy rehetra amin'izao fotoana izao na amin'ny alàlan'ny sary na GIF sarimiaina.
Hita tao amin'ny Android i Imgur, saingy ny tena izy, ny rindranasa dia kinova ho an'ny fitaovana finday mitovy amin'ny kinalan'ny tranokalany, noho izany ny zavatra niainan'ny mpampiasa dia namela zavatra irina ary tsy dia nitovy izany raha nanokatra tranokala izahay ary namakivaky ny virosy rehetra. Ankehitriny miaraka amin'ny kinova 2.0, nohavaozina io avy amin'ny rangotra miaraka amina rindrambaiko novolavolaina sy natao ho an'ny finday, zavatra izay nandrasanay hatry ny ela mba hankafizantsika ny iray amin'ireo serivisy sary tsara indrindra misy amin'izao fotoana izao. Imgurians hampiasa herinaratra avy amin'ny Android.
1 Lavorary ho an'ny Imgoriana
2 Traikefa ara-materialy tonga lafatra
Lavorary ho an'ny Imgoriana
Ny Material Design dia lasa mpanjaka ambony latabatra ary mametraka ny zava-drehetra amin'ny toerany ao amin'ny Imgur nohavaozina miaraka amin'ity fanavaozana vaovao ity. Tsikaritra izany satria novolavolaina avy tany am-boalohany ary ny zoro rehetra sy ny faritra rehetra ao amin'ny fampiharana dia manome fahatsapana mahafinaritra ho antsika izay zatra manana fotoana fialamboly tsara hijerena ireo sary tsara indrindra na ireo fironana GIF ankehitriny.
Ny ekipa fampandrosoana dia afaka mirehareha amin'ny asany miaraka amin'i Imgur, ary mety ho eo alohan'ny iray amin'ireo fampiharana ireo isika hampianatra ny dikan'ny Material Design amin'ny Android. Hatramin'ny nanombohanay ny rindrambaiko dia nahita ny sary voalohany tamin'ny sokajy voalohany «Virosy be» izahay. Sary miseho amin'ny efijery feno misy ny lohateny sary sy ny bokotra FAB eo ankavanan'ny ambany. Avy amin'ity bokotra ity, izay efa malaza amin'ny fampiharana Material Design, afaka miditra amin'ny fampidirana sary na galeriantsika manokana isika.
Miaraka amin'ny sary viraliny voalohany efa eo alohanay Afaka mandeha mikorisa amin'ny swipe lateral isika mba hisehoan'ireo sary viraliny sisa miaraka amin'ny fahombiazana tena tsara sy ny fomba fijery mety. Rehefa mahita iray izay mamela antsika tsy hiteny isika, dia afaka miditra amin'ireo tsikera amin'ny fikosehana haingana hidina hiseho na ny tontonana ankavia hahazoana ireo sokajy samihafa. Ireo fihetsiketsehana rehetra misy famafana ireo dia miaraka amin'ny sary mihetsika Material Design izay manome traikefa tsy mampino an'ny mpampiasa.
Traikefa ara-materialy tonga lafatra
Amin'ny fomban'ny karatra Google Now sy ireo sary mihetsika izay manokatra ny lalana mankamin'ny sary hafa, Ny traikefa amin'ny maha Imgurian anao dia miakatra amin'ny ambaratonga mbola tsy tratra avy amin'ny fitaovana finday. Raha ampiantsika amin'izany ny fanatsarana ny fampidirana sary miaraka amin'ny fahaizana mampiasa fakantsary, sary voatahiry ary ny fampidirana lohateny sy lahatsoratra, manatsara zavatra ary tsara ary mampiseho izany fa namorona rindranasa avy tany am-boalohany izy ireo ary betsaka ny fitiavana.
Ny hany fahasembanana misy ity kinova vaovao ity dia ny politika vaovao momba ny atiny NSFW (Tsy misy azo antoka ho an'ny asa) ao amin'ny tranonkalany. Raha tsorina, dia nanana torolàlana momba ny atiny "No NSFW" foana izy ireo, ny zavatra tokana izay niseho omaly izay manana ekipa natokana "hanala" an'ity atiny ity amin'ny fanehoan-kevitra sy sary nakarina tao Imgur, izay nanjary be dia be ny tsikera ary ny ankamaroan'ireo sary viraly nampidirina tao amin'ny Internet dia misy ifandraisany amin'ity fanapahan-kevitra ity.
Na izany aza, a tongasoa lehibe ho an'ny Imgur vaovao ho an'ny Android izay manome fahatsapana tena tsara ary mampiseho izay hatao amin'ny rindranasa tafiditra ao anaty lamina Material Design. Araka ny nolazaiko tany am-piandohana, imgurians to power.
Imgur: Memes mahatsikaiky & mpamorona GIF
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Imgur dia mahazo fanavaozana lehibe amin'ny kinova 2.0 miaraka amina endrika havaozina tanteraka
Ny hatsaràn'ny Google Photos lehibe
BBM dia manavao ny tenany amin'ny Material Design ao amin'ny kinova beta miaraka amin'ny vaovao hafa